Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အသည်းမှထုတ်သောအရည်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် သည်းခြေရည်သည် အစာခြေရာတွင် အဓိကကျပြီး သေဆုံးသော သွေးနီဥများ၊ ကိုလက်စ်ထရောနှင့် အဆိပ်များကိုဖယ်ထုတ်ရန် အရေးပါသည်။ သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကို PBC ဟုအတိုခေါ်ပြီး အသည်းမှ သည်းခြေပြွန်လေးများ တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးလာသောရောဂါဖြစ်သည်။
သည်းခြေပြွန်များ ပျက်စီးသည့်အခါတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများ အသည်းထဲ၌စုလာပြီး တခြားတစ်ရံတွင် ပြန်မကောင်းနိုင်တော့အောင် အသည်းတစ်ရှူးများ အမာရွတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ (အသည်းခြောက်ခြင်း)
Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကိုအတည်ပြုပြီးသော်လည်း နှစ်များစွာကြာသည်အထိ လက္ခဏာပြတတ်သည်မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်လာနိုင်သော အစောပိုင်းအဆင့်လက္ခဏာများမှာ –
နောက်ပိုင်းအဆင့် လက္ခဏာများမှာ –
အရိုး၊ ကြွက်သားနှင့် အဆစ်များနာခြင်း
ခြေထောက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ် ဖောခြင်း
အသည်းပျက်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းဗိုက်အတွင်းအရည်များစုခြင်း (ရေဖျဉ်း)
မျက်လုံး၊ မျက်ခွံ သို့မဟုတ် လက်ဝါးမှလက္ခဏာများ၊ ခြေဖဝါး၊ တံတောင်ဆစ်နှင့် ဒူးတို့တွင် အဆီများစုပုံခြင်း
အရိုးများ အားနည်းပြီး ကျွတ်ဆပ်ခြင်း (အရိုးပွခြင်း) ထိုမှ အရိုးကျိုးခြင်း
Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများက သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းသည် ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သောရောဂါတစ်ခုအဖြစ် ယူဆကြ၏။
ငါ့ဆီမှာ Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
လိင် – သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း အဖြစ်များသောလူများမှ အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ် – သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းမှာ အသက် ၃၀-၆၀ အတွင်းလူများတွင် အဖြစ်များ၏။
မျိုးရိုး – မိသားစုတွင်း ဤရောဂါရာဇဝင်ရှိလျှင် နောက်ပိုင်း၌သင့်တွင်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
မျိုးရိုးအချက်အလက်နှင့်တွဲလျက် ပတ်ဝန်းကျင် အချက်အလက်များက အသားပေးလာသည့်အခါ သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းဖြစ်လာသည်ဟု သုတေသီများက ထင်ကြ၏။ ထိုပတ်ဝန်းကျင်အချက်အလက်များမှာ –
ပိုးဝင်ခြင်း – သုတေသီများက သည်းခြေပြွန်ခြောက်မှုဖြစ်ရာခြင်းမှာ ဘက်တီးရီးယား၊ မှို သို့မဟုတ် ကပ်ပါးပိုးများကြောင့် ဖြစ်လာခြင်းဟု သံသယရှိကြသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း – ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်မားစေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှ အဆိပ်များ – တစ်ချို့သော သုတေသနများ၌ အဆိပ်ဖြစ်သော ဓါတုပစ္စည်းများသည် သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းဖြစ်ရာတွင် အရေးပါကြောင်း တွေ့ထား၏။
Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ပထမဆုံးအနေဖြင့် ဆရာဝန်မှ သင်နှင့်သင့်မိသားစု၏ ရောဂါရာဇဝင်များကို မေးမြန်းကာ စမ်းသပ်ပါလိမ့်မည်။
အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများက သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကို အတည်ပြုရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသည်းလုပ်ငန်းများအားစစ်ရန် သွေးစစ်ခြင်း။ အသည်းလုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရာတွင် အသည်းရောဂါများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပြဆိုနိုင်သော အင်ဇိုင်းများ၊ သည်းခြေပြွန်များ ထိခိုက်မှုကိုပြနိုင်သော အင်ဇိုင်းများကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်း
ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သော ရောဂါများ စစ်ဆေးရန် သွေးစစ်ခြင်း။ သင့်သွေးအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် anti-mitochondrial antibodies (AMAs) ကို တွေ့ရှိနိုင်၏။ ထိုပဋိပစ္စည်းများမှာ ရောဂါမရှိသူများတွင် လုံးဝမရှိပါ။ တခြားအသည်းရောဂါ ရှိနေလျှင်တောင် မပေါ်ပါ။ ထို့ကြောင့် AMA စစ်ဆေးမှု positive ဆိုလျှင် ရောဂါရှိနေကြောင်း သိရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သည်းခြေပြွန်ခြောက်သောသူ အနည်းငယ်လောက်တွင် AMAs မပေါ်တတ်ပါ။
တီဗွီဓါတ်မှန် – ကြိမ်နှုန်းမြင့်အသံလှိုင်းများကို အသုံးပြုကာ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် – ပုံမှန်ဓါတ်မှန်ထက်ပိုသော အချက်အလက်များကိုသိရှိနိုင်သည့် ဓါတ်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သံလိုက်ဓါတ်မှန် – ၎င်းတွင်း သံလိုက်စက်ကွင်းများကိုသုံးကာ ရေဒီလှိုင်းများဖြင့် အင်္ဂါများ တစ်ရှူးများကို အသေးစိတ်ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်နှင့်မတူသည်မှာ MRI တွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့် မထိတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
Magnetic resonance elastography (MRE). ၎င်းသည် MRI ကိုသုံးပြီး အသံလှိုင်းများနှင့်ပေါင်းကာ အတွင်းအင်္ဂါများကို အထည်လိုက်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုအား အသည်းမာနေခြင်းကို ဖမ်းမိရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သည်းခြေပြွန်ငယ်များကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း – ဒီစစ်ဆေးမှုတွင် ခန္ဓါကိုယ်တွင်းဖောက်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ MRI အသုံးပြုပါက ဤစစ်ဆေးမှုမလိုပါ။
ရောဂါအမည်တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပါက ဆရာဝန်သည် အသည်းစနမူနာယူပါလိမ့်မည်။ အသည်းတစ်ရှူးနမူနာကိုယူကာ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ထိုမှ ရောဂါအမည်ဖြစ်ဖြစ် ရောဂါအဆင့်ကိုဖြစ်ဖြစ် အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
Primary Biliary Cirrhosis (သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းအတွက် အရှင်းပျောက်အောင် မကုသနိုင်သေးသောကြောင့် ကုသမှုများကို ရောဂါရှေ့ဆက်မတိုးရန်၊ လက္ခဏာများကို သက်သာစေရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန်တို့တွင် အားစိုက်ရ၏။
ရောဂါကိုနှေးစေကာ အသက်ကိုဆွဲဆန့်နိုင်မည့် ကုသမှုများမှာ –
Ursodeoxycholic acid (UDCA) – Ursodiol (Actigall, Urso) ဟုလည်း ခေါ်သည်။ UDCA မှာ သည်းခြေအက်စစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသည်းမှ သည်းခြေရည်များထွက်သွားရန် အကူအညီပေး၏။ UDCA သည် သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကို မကုသနိုင်သော်လည်း ရောဂါနုပါက လူနာအသက်ကို ဆွဲဆန့်နိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် အရင်ဆုံးရွေးချယ်ကုသရသည့်ဆေး ဖြစ်သည်။ UDCA မှာ သည်းခြေပြွန်ခြောက်သူတိုင်းအတွက် အာနိသင်မပြပါ။ ရောဂါနုစဉ်လူများ၌သာ ကောင်းကောင်းအာနိသင်ပြပါသည်။ UDCA သည် အသည်းပျက်စီးမှု အတော်များနေသော လူနာများတွင် အာနိသင်လျော့နိုင်ပါသည်။
အသည်းအစားထိုးခြင်း – ကုသမှုများက သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကို မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အသည်းလဲပျက်လာပြီဆိုပါက အသည်းအစားထိုးခြင်းဖြင့် အသက်ကိုဆွဲဆန့်နိုင်ပါသည်။ အသည်းအစားထိုးခြင်းမှာ ပျက်စီးနေသည့် သင့်အသည်းကိုထုတ်ကာ လှူဒါန်းသူထံမှ ကျန်းမာသောအသည်းနှင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် သေသူထံမှ အသည်းရမည်ဖြစ်သည်။ အသည်းအစားထိုးပြီးနောက် သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း ပြန်ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း နှစ်များစွာကြာမှ ပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဆရာဝန်မှ သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်း လက္ခဏာများကို ထိန်းချုပ်ပြီး သင့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာ ရှိနေစေရန် တစ်ချို့ကုသမှုများကို လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ကုထုံးများသည် အဖြစ်များဆုံး လက္ခဏာများကို ထိန်းချုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။
သင်ရော သင့်ဆရာဝန်ရော အတူပူပေါင်းခြင်းဖြင့် တစ်ချို့သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုပါ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အသည်းသွေးပြန်ကြောများတွင် ဖိအားများခြင်း (အသည်းသွေးတိုးခြင်း) – ဆရာဝန်မှ အသည်းသွေးတိုးခြင်းရှိမရှိ သွေးပြန်ကြောများဖောင်းခြင်းရှိမရှိကို သင့်ရောဂါအတည်ပြုပြီးပြီးချင်းနှင့် နောက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်း ရှာဖွေပါလိမ့်ပါမည်။ အသည်းသွေးတိုးခြင်း သို့မဟုတ် သွေးယိုခြင်းရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီးပါက ဘီတာဘလော့ကာ၊ နိုက်ထရိုက် တို့လိုဆေးများအပြင် ခွဲစိတ်ရန် ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။
အရိုးများအားနည်းခြင်း (အရိုးပွခြင်း) – သည်းခြေခြောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အရိုးအားနည်းခြင်းကိုကုသရန်မှာ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဗီတာမင်ဒီတို့ ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်မှ နေ့စဉ်နီးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ထိုမှသာ အရိုးပြန်သန်မာလာပါမည်။
ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းများ – ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းများအား ကာမိစေရန် ဆရာဝန်မှ ဗီတာမင် အေ၊ ဒီ၊ အီး၊ ကေ များကို ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်အားမပြောပါပဲနှင့် ပရဆေးပင်များသုံးခြင်း အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ စားခြင်းတို့ကိုရှောင်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် သည်းခြေပြွန်ခြောက်ခြင်းကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆိုဒီယမ်နည်းသော အစာများကိုစားပါ – ဆိုဒီယမ်နည်းသောအစာများ၊ သဘာဝအတိုင်း ဆိုဒီယမ်မပါသော အစာများကို ရွေးချယ်ပါ။ ဆိုဒီယမ်သည် တစ်ရှူးများကို ဖောင်းကြွစေပြီး ဗိုက်အတွင်း အရည်များကို စုစေသောကြောင့် (ရေဖျဉ်း) ရှောင်ရပါမည်။
နေ့တိုင်းနီးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ – လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် အရိုးအားနည်းခြင်းကို လျော့ချနိုင်သည်။
အရက်ရှောင်ပါ – သင်သောက်သမျှ အရက်များကို အသည်းမှချေဖျက်ပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် အသည်းအတွက် ဒဏ်ပိုပိနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သည်းခြေပြွန်ခြောက်သူများ၌ အရက်ကို လုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးအသစ်မသောက်ခင် ဖြည့်စွက်စာများ မစားခင် ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။ သင့်အသည်းက အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပဲ အလွယ်ဝယ်ယူနိုင်သည့်ဆေးများ၊ ဆေးစာမပါပဲ ဝယ်ယူနိုင်သည့်ဆေးများ၊ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများတို့နှင့် အထိမခံဖြစ်နိုင်သည်။
Primary Biliary Cirrhosis (PBC) – Topic Overview. http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/primary-biliary-cirrhosis-pbc-topic-overview#1. Accessed 26 Feb 2017.